कविराज जसले रक्सी खाएर सिध्याए पाँच करोड, अहिले रक्सी छाड्नेलाई दिन्छन् १० हजार पुरस्कार (भिडियो) – Gazabkonews
कविराज जसले रक्सी खाएर सिध्याए पाँच करोड, अहिले रक्सी छाड्नेलाई दिन्छन् १० हजार पुरस्कार (भिडियो)
काभ्रे । जीवन सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र ! काभ्रे पिपलचौरका कविराज श्रेष्ठको हकमा पनि त्यस्तै भयो । ठिकठाक चलिरहेको थियो जीवन ।
अचानक श्रीमतीको निधन भएपछि उथलपुथल भयो कविराजको जिन्दगीको लय । श्रीमतीको निधनपछि उनी गहिरो कुलतमा फँसे । मदिरा बाहेक अर्थोक केही नचाहिने भयो उनलाई ।
श्रीमती वियोगमा परेका उनी मदिराका लागि जे पनि त्याग्न तयार भए । काठमाडौंको तिनकुनेदेखि काभ्रेको बनेपा र हेटौंडामा जोडेको करोडौं मूल्यको जग्गा जमीन उनले मदिरामा सिध्याए ।
‘त्यतिबेला बुबा र म आफैंले किनेको जग्गा समेत बेचे, अहिले त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्यो भने पाँच करोड चाहिन्छ होला’, उनले भने ।
‘रक्सी नै सबथोक लाग्थ्यो मलाई, कयौं वर्ष म रक्सी खाएर बाटोमा लावारिस भएर सुतेको छु, रक्सी खान नपाउँदा हात काप्थ्यो’, उनी थप्छन्, ‘आत्मबल पनि कमजोर हुने, अनि त्यै भएर जुन बेला पनि नसामा बस्न रुचाउने भएँ ।’ विस्तृत भिडियो कुराकानीमा हेर्नुहोस् ।
श्रीमतीको मृत्युले बिथोलिएको कविराजको जीवन ७ वर्षपछि भने लयमा आयो । अहिले उनले मदिरा सेवन छाडे । मदिराका कारण हुने व्यक्तिगत, आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिका भुक्तभोगी उनी अचेल पनि रक्सी छाड्न अरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्छन् ।
त्यति मात्र कहाँ हो र, उनले मदिरा छाड्छु भनेर बचनबद्धता प्रकट गर्नेहरुलाई १० हजार रुपैयाँ समेत दिन्छन् । ‘रक्सी छाड्छु भनेर आउनु पर्यो एक महिनामा पाँच हजार दिन्छु, ६ महिनापछि थप पाँच हजार दिन्छु’, उनले भने ।
बुद्ध चित्तको खेतीले बनायो करोडपति, एउटै बोटबाट एक करोड ! [भिडिओ]
काभ्रे । काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–५ कानपुरका सिंह बहादुर लामाले पछिल्लो ६ वर्षदेखि बुद्ध चित्त मालाको खेती गर्दै आएका छन् । लामाका अनुसार उनले एउटै बोटबाट एक करोड रुपैयाँसम्मको माला बिक्री गरे । चीनबाट आउने ग्राहक वा व्यापारीले बुद्ध चित्तका दाना साइज नापेर खरिद गर्छन् ।
बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले जप र मालाका रुपमा प्रयोग गर्ने बुद्ध चित्तको माला निकै महंगोमा बिक्री हुन्छ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको आस्थासँग जोडिएको माला किन्न चीन लगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट समेत ग्राहकहरु काभ्रे पुग्छन् । यही खेती गर्दै आएका कृषक लामाले ठूलो भन्दा पनि साना दाना महंगोमा बिक्री हुन्छ ।
बुद्ध चित्तको एक सय आठ दानाको माला बनाइन्छ । यस्तो माला कम्तिमा १३ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने अनुभव लामाले हामीसँग साझा गरे । बुद्ध चित्तको खेती कसरी गर्ने ? यो कस्तो भूगोलमा हुन्छ ? लगानी, घाटा, नाफा, बजार कस्तो छ ? लगायतका जिज्ञासा मेट्न कृषककै गाउँठाउँमा पुगेर तयार पारिएको भिडिओ अन्तर्वार्ता पूरा हेर्नुहोला ।
विधुवाको तिजको पिडा, यो वास्तविक कथा सुन्दा कसका आँखा नरसाउलान् र !
नन्दा छोराको आमा बनिसकिन् भन्ने समाचार आएपछि रवि लामिछाने समेत झुक्किएर भेट्न पुगेछन्
कतारमा नै नेपाली चेलीलाई गर्भवती बनाएर भागेका युवकको घरमा अर्की पत्नि पनि रहिछन्